PTFE manify sivana kitapo ★ Lower Cost PTFE membrane filter bag Manufacturer ★ 1 5 10 25 Nylon Filter Bag,polyester,PP Filter Bag ★ Nylon Filter Mesh Screen
PTFE manify sivana kitapo -
Needle sivana lamba misafidy ara-dalàna nonwoven fanjaitra totohondriny hafa, rehefa avy napetraka hafanana sy ny fitsaboana farany, avy eo
isika manao ny ptfe hoditra manify eo ambonin'ny lamba ny sivana izay mety hanatsarana ny fitaovana lamba manana fahamarinan-toerana simika fampisehoana. Taorian'ny fitsaboana teflon manify dia mifanaraka ny fahafahan'ny malama ambonin'ny, menaka ny rano hampandositra, mora mofomamy famotsorana, hanatsarana ny sivana fahombiazana, na oviana na oviana andian-tsoratra, afa-angovo, ho maro ny mampiasa ny fiainana.
Needle sivana amin'ny PTFE lamba manify Fa vovoka be mpampiasa hetra, fume fanesorana ho an'ny indostria maro. Needle nahatsapa sivana kitapo tsara rivotra permeability, rehefa avy ptfe manify sy ny hafanana toerana fitsaboana, ny lamba sy ny sivana kitapo hitandrina ny malamalama ambonin'ny, afaka amin'ny deformation, mora mofomamy famotsorana.
polyester(PET) sivana lamba
PET Anti voasakantsakan'ny sivana lamba
PTFE manify sivana kitapo
5 responses to “PTFE manify sivana kitapo”